Qofna ma doonayo in uu bixiyo xawaaraha internet in uu helin. Sidaa darteed, barnaamijyadooda imtixaanka xawaaraha internet ayaa ku caan ah in muddo ah hadda. Fikradda ah imtixaanka xawaaraha internet waxaa sidoo kale ka mid ah android iyo macruufka users caan ah. Sidaas awgeed, wax badan oo Chine ee ujeedada labaduba waa laga heli karaa Google Play iyo Lugood.
Si loo eego baaritaanka xawaaraha internet on iPad ah, waxaad u baahan doontaa hab imtixaanka xawaaraha. Speedtest.net Mobile Speed ​​Test by Ookla waa app ah laga heli karaa Lugood ee free download. Waa sahlan oo ah in la isticmaalo baaritaanka xawaaraha internet oo ka mid ah aqlabiyadda dadka isticmaala iPad caan ah. Speedtest.net waa la jaan qaada iPads iyo sidoo kale iPhone. Waxaa lagala soo bixi karaa https://itunes.apple.com/en/app/speedtest.net-mobile-speed/id300704847?mt=8 .
Si aad u bilaabaan imtixaanka xawaaraha internet on your iPad, raac tallaabooyinkan:
Download oo ka Lugood in aad iPad rakibi speedtest.net. Sug app ku dhammayn rakibo.
Marka la rakibo dhamaato, abuurtaan app speedtest.net on your iPad by siyoodba ay icon. Screen A muuqan doonaa badhan leh "Ka bilow Imtixaanka". Tubada ee badhanka.
Dib u fadhiiso oo ay daawadaan sida speedtest.net ka heli server habboon iyo baaritaan geliyaan oo soo bixi xawaaraha loogu internet mid mid aad.
Natiijada ayaa la soo bandhigi doonaa daaqad la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey markii imtixaanka xawaaraha internet-ka la soo dhameeyay. Waxaad dooran kartaa in aad "Guuleysatey Imtixaanka" haddii aad rabto in aad dhab ahaan la hubo oo ku saabsan xawaaraha xiriir aad internet Laakiinse intoodii kale xaqiijiyay in speedtest.net by Ookla waa app ah kalsoon leh jaaniska qalad aad u yar yahay.
Sida loo baadho qaab iPad
Benchmarking iPad ah ma aha sida ugu fudud ee benchmarking aalad android baqdin sababo kala duwan oo dhowr ah. Waayo, mid, tirada barnaamijyadooda diyaar u ah ujeedada aad uga yar tahay kuwa diyaar u ah qalabka android. Mid ka mid ah app lagu kalsoonaan karo, si kastaba ha ahaatee waa "PerformanceTest Mobile" by By PassMark Software Inc. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u falanqeeyaan qalab macruufka ku salaysan dhawr siyaalood oo wax-qabadka. Waxaad markaa soo gudbin kartaa natiijo kuwaas oo is barbar waxqabadka aad iPad qalabka macruufka kale.
Download ku app PerformanceTest Mobile ka https://itunes.apple.com/us/app/performancetest-mobile/id494438360?mt=8 oo ku xidh si aad iPad.
Waxaa Orod mar rakibo la dhamaystiro. Waxaad arki doonaa shaashadda la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey.
Tuubada "Run Cabbirka" doorasho si ha app bilaabi socda baaritaano ku saabsan iPad inuu xukumo ay qaab ciyaareedkiisii ​​kulankii sifooyinka sida qaab processor, naqshadeynta 2D iyo naqshadeynta 3D iwm
Marka habka benchmarking la soo gabagabeeyo, app ka muujin doonaa natiijada waxqabadka aad iPad. Waxaad markaa soo gudbin kartaa natiijo kuwaas inay is barbar dhigaan qaab aad iPad qalabka macruufka kale.
Si aad u hesho natiijo sax ah habka benchmarking ah waa lagama maarmaan si loo hubiyo in barnaamijyadooda ma soo jeeda waxaa la socda halka benchmarking ayaa weli socda. Tani waa sababta socda wax app asalka laga yaabaa in loo isticmaalo khayraadka processor curyaamo waa in ay sameeyaan ilaa ay ka iman kara run ah oo ku saabsan cabbirka.
Talooyin iyo tabaha imtixaanka xawaaraha iPad
Inkastoo imtixaanka xawaaraha iPad waa baaritaan laablaab, tricks qaar ka mid ah ha ka soo haan halka samaynta hal ku siinaya fikrad ah xawaaraha dhabta ah internet inaad helayso on iPad.
Xir dhammaan codsiyada socda.
Codsiyada soo jeeda Close laga yaabo inay kor u nuugo xawaaraha internet.
Haddii xawaaraha internet ah in aad hesho waa si weyn u yar tahay waxa aad bixiso, marka hore hubi xawaaraha ku xira laptop ah in aad modem taasi oo ka cable ethernet. Haddii dhibaatadu ay guulaysato, la xiriir ISP. Haddii si kastaba ha ahaatee, xawaaraha yar ku kooban iPad kaliya, guuleysatey aad iPad ee Wi-Fi.
Chine Qaar ka mid ah in aad u gargaartaan karaa halka hubinta ee xawaaraha internet iPad waa:
Speed ​​Test SpeedSmart WiFi & Mobile Network waa aalad gebi ahaanba bilaash ah in sameeya falanqaynta waqtiga dhabta ah ee xawaaraha internet-ka ee ay imtixaanka xawaaraha download, xawaaraha Upload iyo ping. Baaritaanka waxaa lagu dhammaystiri karaa waqti yar 30 ilbiriqsi. App Tani waxaa loo isticmaali karaa si ay u tijaabiso xawaare xiriir gacanta iyo sidoo kale natiijada la barbardhigi karaa xawaaraha celcelis ahaan ISP iyo Telcom.
Iyadoo interface ah oo quruxsan oo waxay ku Blu afuufaa cusub sida network, Speedtest waa qalab ku anfacaya inay tijaabiso xawaaraha iPad. IT ordi karaan imtixaanka email lagu daro ugu badnaan Upload iyo download xawaare muujinaya. Waxa kale oo uu awood u leeyahay in uu kaydiyo natiijada imtixaanka u falanqaynta mustaqbalka. Natiijada ayaa la iska tuuri karo ama dib sida looga baahan yahay user ee.
Cisco Global Internet Speed ​​Test (wajibaadka)
Cisco wajibaadka waa baaritaanka xawaaraha caadiga ah in cabiraya xawaare internet Wi-Fi iyo sidoo kale shabakadaha gacanta. Dhibic oo lagu daray waa in ay kuu ogolaanaysaa dadka isticmaala waxay yaqaaniin waxa ay qalab macruufka ah waa awood by iyaga loo oggolaado is barbar stats ay la kale ee isticmaala macruufka adduunka oo dhan.
> Resource > iPad > Sida loo Tijaabi Speed ​​u iPad